Soo-saareyaasha Daaweynta Cagaha - Shirkadaha Shiinaha & Daawaynta Cagta
Qaboojinta Gel Cap
Gel maaskaro cadaadin ah
Dib-u-adeegsan karo fal-gallada jilicsan ee jiilaalka, daaweynta barafka degdegga ah ee daalka iyo cagaha oo barara, cagaha kulul, gargaarka xanuunka neuropathy ee ka dhasha cudurka macaanka iyo kiimoteraabiga.
Waxaa lagu soosaaray dhar qaali ah, kabahayaga qabow ee dib loo isticmaali karo way fududahay in la isticmaalo jelinta qaboojinta waxaa lagu daraa gunta hoose iyo buuxda ee kabaha si loogu sii qaboojiyo cagaha.
warshadda waxaa hantidhawr ah BSCI, badeecadaheena waxaa caddeeyay SGS, CE, FDA.
Nooca: Xirmooyinka Kulul & Qabow oo leh sharaabaadyo jilicsan
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: GEL
Waxyaabaha: NYLON + dharka dhogorta leh
OEM / ODM: HAA
Shahaadada: CE FDA BSCE MSDS ISO9001 REACH
Adeegsiga: Daryeelka Guriga Daaweyn kulul / qabow
MOQ: 500 OO KOOXO AH
Plantar cirbadaha daaweynta sharaabaadku waxay sifiican ugufilan yihiin cagaha xanuun daaweynta bararka arch xanuunka arthritis neuropathy chemo
Warshaddeena waxaa baaraya BSCI, badeecadaheena waxaa cadeeyay SGS, CE, FDA.
10 Sano Khibrad ah OEM, ODM. Waxay ku siin karaan talo bixinno mihnadeed oo ku saabsan midabka Customized, astaanta, baakadaha, kaa caawin kara inaad soo saarto xalka ugu fiican ee jel qabow alaabada gargaarka xanuunka.
Daawooyinka sharaabaadyada qaboojiya, warshadeenu waxay leeyihiin cabirro iyo ikhtiyaarro kala duwan, tusaale ahaan buluugga barafka, buluugga tiffany, guduudka, casaanka, cagaarka, madow .Waxaanu caado u nahay suunka cad ama madow ee leh velcro, talooyin badan oo xirmo ah in la doorto.